Enye yezindlela ezivamile namuhla engaphansi ukwahlukanisa kuyinto Penoplex isicelo, okuyinto impahla polymeric kokuba yeseli isakhiwo avaliwe. 98% liqukethe emoyeni, okuyinto, njengoba yaziwa, iyona yisivikelo engcono. Sebenza nge-material impela nje ngenxa isisindo sayo esincane.
Kungani kufanele ukhethe penoplex
Lokhu ukwahlukanisa isisekelo has a amanzi ukumuncwa ongaphakeme, okuyinto 0.5% by volume ngesikhathi wokusebenza. amaseli Kuvaliwe nomoya, osithathayo isinyathelo njengenhlangano yisivikelo esihle ezishisayo. Ngenxa izici umswakama oxosha we indaba azigcina impahla yayo nganoma iyiphi izimo zomthetho eziyinkimbinkimbi, akusiyo kuncike ekubhujisweni phakathi umnkantsha umswakama yangaphakathi. Uma ufuna ukwenza ukwahlukanisa isisekelo Penoplex ngezandla zabo, kuzodingeka ukuthenga leyo nto itholakala ifomu izingqimba ugqinsi ezahlukene. Lezi zihloko zingase zibe anemifantu obandayo, ukuvumela ukusebenzisa ukwahlukanisa ngempumelelo enkulu. Qinisa ke, ungakwazi masinyane, ekuvimbeleni ukwakheka emalungeni abandayo, ezivuzayo namagebe.
Izindlela eyinhloko base ukwahlukanisa Penoplex ikhaya
Uma unquma ukusebenzisa heater achazelwe isisekelo, ungasebenza njengesisekelo ukuthatha omunye ubuchwepheshe ekhona. Ngakho, ukwahlukanisa kungaba mpo, futhi walivikela hhayi kuphela isisekelo ngokwayo, kodwa plinth. manipulations okunjalo abazenzi, njengoba umthetho, ngaphandle kwaleso sakhiwo, ngaphansi kwesivikelo engena isikhala ngaphakathi endlini engaphansi izindonga, okuyinto kakhulu bandisa ukusebenza ukwakhiwa.
Penoplex kabani ukujiya ngokuvamile kuba 50-100 mm, ogibele ebusweni olungiselelwe usebenzisa ingcina kuyinto polymer ezisekelwe noma usimende. Lapho obandayo asendabeni kumila ipuleti kuyodingeka olunye kokungathembeki dowels ekhethekile. Ovundlile ukwahlukanisa melkozaglublennogo strip isisekelo kuhilela ekuvikeleni izakhiwo kusuka zeqhwa futhi nokusondelana amabutho tangential frost ugonyuluka. Ukuthwala amapuleti umsebenzi uzodinga zithweswe base isisekelo.
Uma unquma ukwenza ukwahlukanisa kwesisekelo Penoplex ngezandla zabo, ukuthi ubuchwepheshe ungahlinzekela kumiswa endaweni izimpumputhe endlini, okuyinto kwahambisana ukwahlukanisa kuchazwe. Le ndlela lubaluleke ukuvikelwa izakhiwo kusuka amabutho ukusonteka frost ugonyuluka. Ikakhulukazi ubuchwepheshe olufanele kakhulu ugonyuluka nenhlabathi. Ekuqaleni, kuyoba kudingekile ukulungisa umcamelo lapho embondelene amapuleti Penoplex kuphela uma kunesidingo ukuqala kumiswa endaweni izimpumputhe ngokhonkolo.
Izincomo ukwahlukanisa mpo
Kwembulunga isisekelo Penoplex izandla siqu engenziwa ngokwendlela indlela ukwahlukanisa mpo. Le ndlela enemisebenzi ngoba ingasetshenziswa kwi elalisanda kwakhiwa futhi izakhiwo ezikhona kakade. Kulo mBhalo kubalulekile bambe up phansi phezu ukujula. Ekuqaleni, isisekelo is bahlanza inhlabathi izinsalela, zonke izinhlobo ukungcola nothuli. Uma ebusweni has semfene, khona-ke ungakwazi qondanisa nge slurry usimende.
In the isinyathelo esilandelayo, ebusweni nokuvikela ne itiyela noma mastic amanzi ezisekelwe polymer. Ukwakheka kuphela-based ukunikeza njengoba penoplex kusukela contact zingadilizwa nabo. Uzodinga ukuthenga ingcina ngoba styrofoam, okuyinto buhlanjululwe ngokusho imiyalelo. Kufanele uhlanganise kahle futhi ushiye ukuvuthwa. Okulandelayo, ingcweti siqala isisekelo wokugubha, ebusweni okuyinto kumele kumakwe amapuleti phansi emakhiyubhi umugqa. Uma umklamo has semfene, heater ungakwazi lokuhlola ngezansi base ezingeni Nokho, okuyinto, ngeke kuthinte umphumela wokugcina.
Uma unquma ukuba afeze isisekelo ukwahlukanisa Penoplex ngezandla zabo, isinyathelo esilandelayo ukusebenzisa ingcina kuya ukwahlukanisa ezindaweni eziningana. Uma kukhona thwi ebusweni Ukwakheka kungenziwa eshelelayo nombala.
Ngaphezu kwalokho penoplex 50 mm ukujiya icindezelwa ngokumelene isisekelo, bese amazinga off uma kudingeka. I ingxenye elandelayo iqinile nge inkatho obandayo. Ngezinye izikhathi ufuna ukusetha penoplex ngongqimba eziningana, futhi izingxenye uhlelo ukwahlukanisa kufanele ibekwe iphethini checkerboard, ungqimba yesibili ligamanxa omhlophe webhola odlule. Lokhu kuzoqinisekisa nomphumela omuhle. Isendlalelo yesibili eqondiswa ingcina efanayo, kodwa hhayi ubuchwepheshe ezahlukene.
Kaningi muva nje wenza ukwahlukanisa isisekelo Penoplex. lezi imisebenzi ubuchwepheshe kumele ufundwa master ngasinye, ngubani uhlose bahlanganyele idatha zokukhwabanisa. Le ngxenye komhlaba base lapho ebeka kokungathembeki ezengeziwe Penoplex kungadingeki, njengoba kuyoba ukugcwaliswa eyanele icindezelwa ngokuqinile ngokumelene nezwe lakwa. Esikhathini cap penoplex okwengeziwe ekhethekile dowel-wawuqinisa ngezipikili. Banezinhliziyo cap ububanzi plastic, okuvumela ukuba ugcine izinto odongeni aliphumi ngenhla ubuso bayo.
Lezi zingqimba kumele kwenziwe ngokusebenzisa izimbobo ukuthi kudingeka siqhubeke ukhonkolo 4 ngamasentimitha. Uma usukulungele ukufaka fasteners. Ubude sokuprakthiza kufanele bakhethwe ikhumbula ukujiya impahla. Uma wenze ukufudumala Penoplex isisekelo, ubuchwepheshe echazwe esihlokweni, bese i-cap zokuhlobisa phezu singasebenza olukhonkiwe noma olufakwe ama-tile ingcina, ngaphezu kwalokho kwagcizelela izingqimba anezikhala.
zifudumele we setshe isisekelo
Uma isakhiwo isethwe phezu setshe noma strip isisekelo, esetshenziselwa umsebenzi kungaba penoplex ukushuba ka 5-10 ngamasentimitha. Ekuqaleni, kufanele ukumaka isayithi isisekelo, bese ukususa ungqimba phezulu inhlabathi, poring inikezwe umsebenzi wokwakha. Lapho kukhishwa phansi, zama ukuvimba ukukhanya kungangeni phansi kakhulu ngisho, leyo zokugcina ezingu-30 amasentimitha is best isuswe ngesandla. Njengoba yenziwe iphimbo kahle ohlangene, bese egcwele isihlabathi, okuyilona elisebenzayo futhi ukuba uphawu.
Ngaphambi vimbela uhlobo isisekelo setshe, kubalulekile ukwenza formwork yesikhashana nangemva base ukhonkolo ukulungiselela. uyogcwalisa isixazululo isinyathelo esilandelayo ungqimba ukwakheka mncane ayidingekile. Uma isizinda ukhonkolo Uqinisa, ke Penoplex amapuleti embondelene, obandayo anemifantu okuyinto musa yakha izikhala. Penoplex embondelene polyethylene ifilimu, kulandele i-glue amalunga omzimba aqoshiwe. Ngalo uzokwazi ukudala ungqimba ungangenisi amanzi, okuyinto ukunivalela ukugeleza ukhonkolo ngokusebenzisa amabhodi ukwahlukanisa.
Yini okufanele banake
Ukuze afeze le misebenzi, ungasebenzisa penoplex 50 mm awugqinsi, lokhu kuyoba okwanele ukuze izifunda ne sezulu akazange abe nokhahlo kakhulu. Ngemva kokuqeda wonke umsebenzi ezichazwe ngenhla kungaba zakha formwork, obeka ukugcizelela futhi isisekelo bay setshe. Uma isixazululo Uqinisa, formwork luyasuswa, futhi phambili ukushisa nangokuvikela ohlangothini izindonga nge ukwaziswa okufanayo. Uma kuziwa melkozaglublennom strip isisekelo, umsebenzi kumele kwenziwe phezu ubuchwepheshe obufanayo.
Kwembulunga isisekelo inhlabathi nge zihlale zifudumele
Uma uphakamisa umbuzo indlela vimbela isisekelo, ungakhetha indlela esihlinzeka ukwahlukanisa phansi. Lokhu kunciphisa hhayi kuphela izisulu obeka isisekelo ukujula, kodwa futhi kunciphisa tindleko ukwakhiwa. Lapho ukusebenza ins ayosihlomisa endaweni abayizimpumputhe. Uma mpo ukwahlukanisa yangaphandle seliqediwe, kubalulekile ukuba lelisu backfill amatshe nesihlabathi kuya ku-15 amasentimitha ngezansi eliphansi.
Lokhu kulandelwa kokuqhubeka ekwakhekeni formwork amapulangwe Ukuhamba kusuka odongeni ibanga imitha alinganayo. Ukuphakama lo mklamo kufanele kube ngu-30 amasentimitha. Penoplex, ogama ukufakwa kuyoba kamuva kancane, uthenge kusengaphambili. In the isinyathelo esilandelayo phansi endaweni izimpumputhe kumele ohlangene futhi kuqondiswa. Manje sesingasho ukuthi siqiniseka uqhubekele laying ukwahlukanisa amapuleti ku base ipherimitha. Esikhathini embondelene ukwahlukanisa polyethylene ifilimu ne agqagqene ungene isizinda, lapho ke ungakhipha uyogcwala ukhonkolo ku formwork. Indawo yayo kuqondiswa ukwakha eyehlelayo kancane Ohlangothini olungaphandle. Ngemva lukhuni isixazululo formwork angasuswa, futhi endaweni izimpumputhe kufanele ukumphakamisa nge Ornamental itshe noma umgandayo tile.
Penoplex, obiza ruble 1580., Elinikelwe amaphakheji ehlukile. Ngokwesibonelo, okukhulunywe intengo umthengi kuyodingeka bakhokhe 5,76 ngamunye imitha square indaba, okuyinto 0.288 cubic metres, noma 8 amapuleti.
Yini ukunikeza lokuzalwa kababa?
I-Meningitis: izimpawu zesifo